Ikpocha ikuku na Disinfection System ụlọ ọrụ na ndị nrụpụta | ABG
SONGZ ikuku dị ọcha na disinfection system bụ ụdị ihe kacha egbu egbu nje virus, yana ọrụ antivirus, sterilizer, VOC filter na PM2.5 filter.
Ikpocha ikuku na disinfection system
Nkọwapụta nke ikuku dị ọcha na teknụzụ teknụzụ
Adabara otu nloghachi ikuku conditioner：
Adabara abụọ nloghachi ikuku conditioner：
Ọrụ mmetọ Mkpokọta ihe na-emetọ ihe Gosiriolu ikuku (m3 / h) Na-arụ ọrụ 1h iwepụ ọnụego (%)
Ezigbo (HCHO) 0.96 ~ 1.44mg / m3 ﹥4800 90.4%
Ọnụ ọgụgụ ndị na-agbanwe agbanwe (TVOC) 4.8 ~ 7.2mg / m3 ﹥4800 92.2%
Akụrụngwa 0.70 ~ 0.85mg / m3 ﹥4800 99.9%
Microorganism Dị ka GB 21551.3 ﹥4800 99.9%
Ọnọdụ ule: ụgbọ ala buru ibu nke 12-mita, ndị na-ekpo ọkụ 6 evaporator, ọrụ ikuku kachasị elu, ntụgharị dị n'ime
Ion ndị siri ike nwere ikike redox siri ike, nwere ike ịgbanye ma decompose formaldehyde, methane, amonia na gas ndị ọzọ na-esi ísì ụtọ (VOC) n'ime ụgbọ ahụ n'ime ụlọ bon dioxide, mmiri na oxygen. Mwepụ iwepụ ruru 95% mgbe elekere 1 nke ọrụ.
Nnwale on-sit: Mgbe minit 25 nke ịdị ọcha miri emi, PM2.5 belatara site na 759 μg / m3 (ọkwa isii dị nro) na 33 μg / m3 (ogo ikuku nke mbụ), na ikuku ikuku dị oke mkpa mma.
1. Na ọnọdụ ibikọ ọnụ, ọnụọgụ nke ozone bụ 0.05ppm, nke pere mpe karịa uru nchekwa nke 0.15ppm. Ọnụọgụ ụlọ ahụ ruru 99% mgbe ọrụ nkeji 30 gachara.
2. Ultraviolet enweghị ike ịbanye ma ọ dịghị emerụ ahụ mmadụ mgbe ọ naghị afụcha ya ozugbo; enwere ihe nkpuchi foto, nke na-eme ka ihe ndozi na grille dị n'etiti oriọna sterilization nke ultraviolet na ụlọ iji gbochie ndị njem ozugbo, Enwere ike iji ya n'enweghị nsogbu.
Ozone ịta Terchọta ọnụọgụ ọnụọgụ 0.05PPM Terchọta ọnụọgụ ọnụọgụ 0.1PPM
oge awa ọrụ Nkeji 15 Nkeji 30 Nkeji 15 Nkeji 30
Mpaghara okike 93.7% 99.8% 98.6% 99.9%
Ọnọdụ ule: Jiri ntụtụ 0.05ppm na 0.1ppm O3 iji nwalee mmetụta nsị ya na ọnụọgụ nwa na akpa 200L mechiri emechi.
Usoro ikuku dị ọcha na uru ya
1. Anọ isi teknụzụ
Ihe Electrostatic ájá collection (PM2.5) UV oriọna ionizer Photocatalyst nzacha
Ntughari nwa nwoke × √ √ √
Wepụ VOC √ × √ √
2. Ike ion photocatalytic polymerization technology, mmadụ-igwe coexistence, disinfection na nwoke ịga ụlọ ọgwụ:
Nkà na ụzụ siri ike nke nwere ikike, yana UVC ultraviolet, oxygen na-arụ ọrụ, ion na-adịghị mma na teknụzụ polymerization fotocatalytic, na-egbu ngwa ngwa na nje virus na nje bacteria, ma gbochie mgbasa nke ọrịa. Stgba ogwu bụ 99.9%, na mkpochapụ uzuzu bụ 99.9%. Ọ nwere ike iwepụ gas dị njọ dị ka formaldehyde, benzene, amonia, na isi ísì ụtọ dị iche iche, anwụrụ ọkụ, na isi na ebe obibi ụgbọ ahụ. Ọ nwere ọnọdụ ọrụ nke igwe mmadụ na-ebi ndụ, disinfection na-enweghị njedebe nwụrụ anwụ, na mmetọ.
3. Gbakwunye ion oxygen na-adịghị mma iji kpochapụ ike ọgwụgwụ njem.
6 nde ion oxygen na-adịghị mma, na-eme ka ikuku dị jụụ, na-eme ka mkpụrụ ndụ rụọ ọrụ, na-eme ka nchebe mmadụ dịkwuo mma ma wepụ ike ọgwụgwụ njem.
4. Mwepụ nke ikuku, ire ere nke gas ndị na-emerụ ahụ, enweghị nchekwa na enweghị ọkụ.
Arụnyere n'ime ikuku conditioner grille, obere obere anaghị etinye ohere ọzọ, site na mmeghachi olu iji mebie gas dị ọcha n'ime ụlọ ahụ, wepụ PM2.5, PM10 kwụsịtụrụ ahụ, debe ikuku ikuku n'ime ụgbọ ala ahụ dị ọhụrụ ma dị mma, mba consumables n'oge eji, Mmezi free.
5. Ime Remote, nchekwa ịdọ aka ná ntị, nwere ọgụgụ isi akara.
Enwere ike ijikọ ya na akara nke ụgbọ ala ahụ dum, yana enwere ike nyochaa data nke ihe mmetụta ikuku dị na ezigbo oge na dashboard, yana ntụgharị uche nwere ọgụgụ isi na ịdọ aka ná ntị nchekwa oge nke ndị na-eme ka ndị ọcha dị ọcha nwere ike ime dị ka mma ikuku; windo nloghachi nwere ngosipụta nke aka ya (ngosipụta ihe ngosi PM2.5, ọnọdụ okpomọkụ, iru mmiri na ikuku ikuku, nhọrọ), na-enye ndị njem ohere ịghọta nke ọma ọnọdụ mmetọ nke gburugburu ụgbọ ala site na ngosipụta ahụ, na-eme ka ngwaahịa ahụ dịkwuo elu ma bara uru na ọdịdị.
6. Nrụ ọrụ dị elu dị elu, ike ike dị ala, ntakịrị mmetụta na ike ụgbọ ala ma ọ bụ ịgbagharị dị nso.
"Dynamic polarization" mode na-ekwe nkwa ogologo oge ma kwụsie ike ịdị ọcha arụmọrụ, ájá ejide ikike bụ ọtụtụ ugboro elu karịa iyo nke otu nkọwapụta; kwekọrọ na sistemụ ọkụ nke ụgbọ njem, ike oriri nke ngwongwo disinfectant nke ụgbọ ala 12-mita bụ naanị 10W, nchekwa na nchekwa nchekwa, dabara adaba na ụgbọ ala ndị nkịtị na eletriki.
Ule nke nhicha ikuku
1 Mwepụ iwepụ（1h） 99.9%
2 Formaldehyde iwepụ ọnụego （1h） 90.4%
3 Toluene iwepu onu（1h） 91.4%
4 Mwepụ iwepụ（1h） 92.2%
5 Xylene iwepụ ọnụego（1h） 93.0%
Isi Asọmpi nke SONGZ Ikpocha Ikuku
SONGZ ikuku ikuku
Integrated ọrụ ọcha
Ọ chọrọ ikuku? Fans na-ekupụ ikuku Enweghị oghere
Usoro nhicha ikuku 1. Senti ike ikuku ọcha usoro2. Mma ozone modul (nhọrọ)3. Integrated electrostatic ájá mwepụ
4. Integrated photocatalyst iyo
5. Integral UV ịga ụlọ ọgwụ
1. Vehicle UV oriọna nwoke ịga ụlọ2. raygba ọgwụ disinfectant
Isi asọmpi 1. Mkpokọta mwekota, obere size, nnọọ ole na ole mgbanwe ụgbọala
2. Nwere ike n'ụzọ dị irè wepu niile di iche iche nke nje, nje, ájá na-egbu egbu na-emerụ haruru
3. Ọnụ ego dum nke nhicha dị ala. Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịwụnye modulu ozone enwegoro, ịkwesịrị ịgbakwunye ụgwọ ọzọ karịa 100 RMB.
4. Enwere ike ịgbanye ọrụ nhicha ikuku mgbe ị na-ebu ndị njem. Igwe nhicha ahụ n'onwe ya ga-emepụta obere O3 (ihe dịka 0.02ppm, n'ime ebe dị nchebe) iji nweta nsị nsị oge.
5. Mgbe achọrọ mgbochi nje maka ụgbọ ala ahụ dum, tupu a gbanye ụgbọala ahụ ma ọ bụ mgbe ọ na-enweghị onye nọ n'ụgbọala ahụ, agbanyere ozone mode, ọ ga-akwụsị na-akpaghị aka mgbe minit 15 gachara, nke na-arụ ọrụ nke ọma na nchekwa ike.
6. Mgbe agbanwuru usoro jụrụ oyi, kpo oku na ikuku ikuku, a na-amalite fan nke s sterilization system na-akpaghị aka maka nkeji 5 wee kwụsị nkeji iri abụọ. 1. Nnukwu mgbanwe na ụgbọala ahụ dum, ọ dị mkpa iji wụnye oriọna ultraviolet dị n'ụgbọ ahụ, na ọ dị mkpa ka etinyere usoro ịgba mmiri disinfection spray. Ndozi mmezi bu nnukwu ma ugwo di elu.
2. Bacteria na nje nwere ike ihicha, mana enweghi ezi ogwu maka uzuzu na gas na-egbu egbu na ihe ojoo.
3. Anaghị anabata ikuku ọcha na disinfection mgbe ị na-ebu ndị njem. Ọ bụrụ na ịme ma mgbe disinfection, mgbe ahụ a chọrọ mgbanwe ikuku, na arụmọrụ a dị ala.
Usoro ntinye nke usoro SONGZ Ikpocha Ikuku
Ka ọ dị ugbu a, e nyela ya n'ọtụtụ batrị n'ụdị OEM dị ka Xiamen Jinlong na Zhengzhou Yutong.
Anyị nwere olileanya iso gị rụọ ọrụ iji meziwanye gburugburu ebe obibi mgbe ndị mmadụ na-eme njem ma melite ogo ikuku n'ime ụgbọ ahụ!
Nke gara aga: Igwe ikuku ụgbọ ala maka Bus Decker ugboro abụọ
Osote: Ntụ oyi maka ụgbọ njem